Friday June 17, 2022 - 12:30:57 in Wararka by Mohamed Muse Mohamed
Qeybta 21-aad ee Xoogga Dalka kumaandooska Xoogga Dalka ee Danab iyo Daraawiishta Galmudug ayaa gurmad usoo gaarmaday dadka degaanka intaas kadib waxaa la sii baacsaday maleeshiyaadkii nabadii Al-shabaab degaan 20 Kiilo mitir ujira degaanka Baxdo oo hoostaga magaalada Cadaado ayay ciidanka kaga daba tageen waxaana halkaasi markale lagu gaarsiiyay jab xoogaan markale ayaa laga dilay maleeshiyaad badan.
64 maleeshiyaad iyo horjoogayaal katirsan Al-shaab lagu dilay degaanka Baxdo iyo degaanada u dhow dhow.
Gaari Land Gruiser oo soomaalidu u taqaan Leeylo Calaawi oo waxyaabaha qarxa ka buuxaan ayaa laga qabtay nabadiidka.
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Jeneraal Odowaa Yuusuf Raage ayaa Warbaahinta Ciidamadda Qalabka Sida u sheegay in Ciidanka Xoogga Dalka ay u gurmadeen dadka degaanka baxdo oo iska caabiyay nabadiidka isagoona ku amaanay si geesinimada leh ee ay isaga difaacan Argagixisada.
Jeneraal Odowaa TaliyahaCiidanka Xoogga ayaa intaasi ku daray in lasii baacsanayo firxadka maleeshiyaadka nabadiidka Al-shabaab.